News - Ingmara mma nke eji okwute na ọdịdị
Maka okwute ala, ndị na-emepụta ihe na-ahụ n'anya na nka okike. Oge ochie dị mfe nke mgbaji ọkpụkpụ na usoro okike na-emebi ọganihu mbụ ahụ, nke na-eweta mmetụta ọhụụ dị ukwuu na mmetụta a na-atụghị anya ya.
Nkà nke okike
Nkume okwute bụ ụdị okike dị elu na-enweghị ọgwụgwọ ọ bụla, nke a na-emepụta n'ụzọ nkịtị, dị ka slate. Elu nke granite nwere undulation na mgbaji ọkpụkpụ.
Ọ bụrụ na i lee anya na nka na nka na sayensị na mgbidi, a na-ahọta ahịhịa nke agwa na-adịghị mma na ebe a na-egwupụta egwu. Ìhè anyanwụ na-agbadata site na ọdịiche dị n'etiti alaka na epupụta, akwa site na oyi akwa na mgbidi. Oghere a na-adịwanye jụụ na udo na nkwekọ.
Banye ebe a site na ebe bara ọgaranya, ndị mmadụ anaghị eche na ha chọrọ ịkwụsị ebe a ma jiri nwayọ nwayọ chere ya.
Udidi nke uzo elu
Kwanye omimi na obosara nke elu okwute bụ ebe a na-arịgo steepụ. Ọ bụghị naanị mgbochi skid, kamakwa ọ nwere mmetụta ọhụụ pụtara ìhè, na-akpụ ụdị pụrụ iche na nka na sayensị.
Mmiri a miri emi, nke nwere okooko osisi gburugburu ya na ahịhịa dị elu na nke dị ala, na-agbakwunye ibe ha, nwoke ahụ gbasoro anya ịchụso njedebe mara mma.
Igwe ihu igwe na-acha uhie uhie
Okirikiri ihu igwe na-acha uhie uhie na-adị larịị ma doo anya, oji na ọcha na nkume ahụ, dị mfe ma dị omimi, oji dị ka ụwa dị ka ọnụ ọnụ ugwu, snow dị ọcha dị ka nsụda mmiri snow. Oge ụfọdụ na-enwu gbaa, oge ụfọdụ dị jụụ, dị ka eserese ọdịdị ala.
Post oge: Ọkt-11-2020